Tuugo ayaa ka xaday guri Amiirad Sacuudi ah ka degeneyd Paris alaab lagu qiimeeyey… – Hagaag.com
Tuugo ayaa ka xaday guri Amiirad Sacuudi ah ka degeneyd Paris alaab lagu qiimeeyey…
Posted on 8 Nofeembar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Tuugo ayaa ka xaday alaabo qaali ah oo qiimahoodu dhan yahay 600,000 euro guri ay leedahay Amiirad Sacuudi ah oo ku yaal magaalada Paris, ilo ku dhow kiiska ayaa sidaa sheegay Jimcihii, oo ay ku jiraan boorsooyin naqshadeysan iyo jaakado dhogor laga sameeyey.
Amiiraddan 47 jirka ah, oo fasax ugu maqnayd Koonfurta Faransiiska, isla markaana aan cagaha soo dhigin guriga wanaagsan ee ku yaal xaafadda 8aad ee Paris tan iyo bishii Ogosto, ayaa ogaatay markay soo noqotay in boorsooyinkii, saacadihii, dahabkii iyo dhogortii la waayey.
Amiiraddan oo aan magaceeda la shaacin ayaa khamiistii la dhigay isbitaal xaalad naxdin leh, waxaana dacwad oogayaashu ay fureen baaritaan rasmi ah qeybta gaarka ah ee dambiyada abaabulan ee ciidamada booliska ee Paris.
Laakiin ma aysan caddeyn haddii uu jiray in guriga la jabsaday, sida ay sheegtay wargayska Le Parisien. Tuugga ama tuugada ayaa u muuqda inay soo galeen guriga, oo ku yaal meel ku dhow halka loo yaqaan ‘Swanky Avenue George V’ oo ku taal bartamaha caasimada Faransiiska, iyadoo aan wax xoog ah la adeegsan, ilo-wareedka ayaa intaa ku daray in la waayey furayaal keyd u ahaa guriga.
Magaalada Paris ayaa sanadihii la soo dhaafay waxaa ka dhacayay dhac iyo xatooyo, mana ahan markii ugu horeysay oo xubno ka tirsan qoyska boqortooyada Sacuudiga bartilmaameed laga dhigto. Sannadkii 2018-kii, Amiirad Sacuudi ah ayaa soo warisay in boqolaal kun oo euro oo dahab qiimihiisi ahaa laga xaday qolkeeda ku yaal Ritz, sanadkii 2016-kii, haweenay aan la aqoonsan oo ka tirsan qoyska boqortooyada Sucuudiga ayaa sheegtay in looga dhacay saacad € 1 milyan ah agagaarka Louvre iyadoo halkaasi lugeyneysay.